GF (J) series semi-contact plate freezer with refrigeration unit, China GF (J) series semi-contact plate freezer with ifriji unit Abakhiqizi, abahlinzeki, Factory - Square Technology Group Co., Ltd.
Isifriji samapuleti eshalofini esikhiqizwe yi-Square Technology singashesha ukumisa izinhlobo eziningi zemikhiqizo, njengezinhlanzi nezimfanzi, i-shellfish, imifino, inyama ehlukanisiwe, izinkukhu ezihlukanisiwe, kanye nokudla okuningi okubandayo okufriziwe. Amapuleti abekwa ngokuvundlile njengamashalofu ngenkathi isikhala sesendlalelo silungiswa. Imikhiqizo izobekwa epuletini eshalofini ukuze iqhwa. Ihlukile kumazinga afriziwe avundlile wepuleti, ubukhulu bayo obukhulu bungakhelwa umthamo wokuqandisa ophakeme. Amafriza amapuleti eshalofu anjalo nawo angafakwa i-compressor unit.
◆ Kuyinhlanganisela yefriji yokuqhuma nefriji yokuxhumana. Umkhiqizo uthinta ipuleti le-aluminium esiqandisini eceleni kwawo, kuyilapho abalandeli bashaya ukugeleza komoya okubandayo ngenhla nangasemaceleni omkhiqizo.
◆Ipuleti lenziwe nge-grade grade aluminium. Isifriji sihamba ngemigudu eminingi engaphakathi kwepuleti le-aluminium. Ipuleti lilula, liqinile, limelana nokugqwala futhi lihle ekusetshenzisweni kokushisa.
◆Uhlaka luyinsimbi eshubile eshisayo, emelana nokugqwala kakhulu.
◆Indawo ebiyelwe ifakwe ngcezu eyodwa yePolyurethane ikhihliza amagwebu ukuqinisekisa ukwakheka okuqinile nokunciphisa ukulahleka kwamakhaza ngokususa amalunga.
◆Ifriji ifakwe eyakhelwe ngaphakathi eJalimane iBitzer multiple compressor unit. Kusetshenziswa kakhulu amandla. Uhlelo lwefriji lungaba ne-compressors eyodwa, ezimbili noma ezintathu ezisebenza ngasikhathi sinye kuye ngomthwalo wefriji uqobo.
● Umthamo wokuqandisa:> 3000kg / batch (Kususelwa ku: 15Kg / block, ubukhulu be-block: 600mm × 400mm × 80mm)
●Inombolo yeplate: Izendlalelo eziyi-10 ezibandayo: 10
●Plate okokuqandisa endaweni: 5500mm × 1200mm
●Plate imvume: 144mm; Ukususwa kwe-Net: 110mm
●Ukunikezwa kuketshezi: Pump
●Umthwalo wesiqandisi: 105kw (+ 35 ℃ / -35 ℃) (Ngomoya opholile)
●Isikhathi sokuphuzwa.:+20℃ Isikhathi esiphelelwe yisikhathi.:-18℃
●Isivinini somoya phakathi kwamapuleti: 2m / s
●Ubukhulu sekukonke: 8520mm (L) × 2115mm (W) × 2360mm (H)
● Ilungele izinhlanzi ezibandayo ngazodwana, imfanzi, ukudla okulungile, izinkukhu nokunye okuncane okuhlanganisiwe .
Imikhiqizo Elula / Egciniwe